कस्तो छ तपाईंले जिउ पुछ्ने तौलिया ? - ज्ञानविज्ञान
तौलिया सुख्खा वा धेरै समय चिसो/भिजेको कुरा त्यसबाट आउने गन्धबाट थाहा पाउन सकिन्छ। ‘तौलियाबाट गन्ध आइरहेको छ भने, जहाँबाट गन्ध आउँदै छ, त्यहाँ ‘माइक्रोब्स’ मौलाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले तत्काल तौलिया धोइहाल्नुपर्छ,’ टियर्नो भन्छन्। फिलिप टियर्नोको भनाइमा भिजेको (नुहाएर जिउ पुछेको) तौलिया एउटा जीवित ‘अग्र्यानिज्म’हो ।
यस्तो, तौलियामा जीवाणू हुर्कन र वृद्धिका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण (जस्तोः पानी, तापक्रम र पर्याप्त अक्सिजन) हुन्छ। ओसिलो ठाउँमा ‘माइक्रोब्स’को बास हुन्छ। यसै कारण टियर्नो भन्छन्, ‘कुनै पनि तौलिया धुनुअघि तीन पल्ट मात्र प्रयोग गर्नु ठीक हुन्छ। र त्यो पनि हरेक पल्ट प्रयोगपछि तौलिया पूर्ण रुपमा सुख्खा (सुकेको) हुनुपर्छ।’
ब्याक्टेरियाले भरिपूर्ण तौलियाले शरीर पुछे तपाईंका शरीरमा ती ब्याक्टेरिया सर्छन्। फलस्वरुप फोहर र संक्रमण सफा गर्न भर्खर तपाईंले नुहाएको सबै बेकार हुन जान्छ। त्यसमाथि पनि यदि तपाईं तौलिया अरुसँग साझा गरिरहनु भएको छ भने तपाईंको शरीरले नचिनेका जीवाणु र संक्रमण तपाईंमा सर्न सक्छ। टियर्नो भन्छन्, ‘जस्तो कि ‘स्टेफ्नोककस औरस’ले घाउ/डन्डीफोर आउन सक्छ वा संक्रमण हुन सक्छ ।’
तर के स्मरण गर्नु आवश्यक छ भने, सबै माइक्रोब्स हानिकारक हुँदैनन्। यथार्थमा तीमध्ये धेरै हानिकारक हुँदैनन् र लामो समयमा केही माइक्रोब्स लाभदायक पनि हुन्छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा प्रचलित एउटा मान्यता ‘हाइजिन हाइपोथेसिस’ अनुसार सानो उमेरमा नै केही जीवाणू र केही निश्चित संक्रमण बालबालिकाले सामना गरे मात्र उनीहरूमा रोग प्रतिरोध क्षमता बलियो हुने र भविष्यमा सामान्यखालका संक्रमण सहजै पराजितगर्ने विश्वास गरिन्छ। यसो भन्दैमा गन्हाउने तौलिया कसैलाई पनि मन पर्दैन। खासगरी, त्यस्तो तौलिया जसको गन्धले नै जीवाणूको स्वर्ग भएको संकेत दिइरहेको हुन्छ।
Topics #जिउ #तौलिया
Don't Miss it कफीले आयु बढाउन सक्ने एक अनुसन्धान अनुसार
Up Next बच्चामा खानाको अरुचि भको छ ? यसरी हटाऊँ
पूरै गाउँलाई बन्धक बनायो भालुको बथानले
भालुको समूहले गाउँलाई चारैतिरबाट घेरेपछि वन विभागको टोलीले उक्त गाउँका जनताको सुरक्षाका लागि गस्ती गरिरहेको छ । भालुले गाउँलाई नै…
जानी राखौँ यी सब्जीहरुले हाम्रो स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउछ
हरियो सागपात र तरकारी हाम्रो जीवनका लागि अति आवश्यक खाना हो । यसमा हामीले भिटामिन, प्रोटिनजस्ता पोषक तत्वहरु पाउँछौँ ।…
याे अवस्था भएका व्यक्तिले भुलेर पनी नखानुहाेस् माछा
माछाको मासु खान मनपराउने अधिकांशले यहि सोँच्छन् कि यो अति स्वस्थवर्द्धक खानेकुरा हो। हुन त, माछाको मासुमा ओमेगा-३ फ्याटी एसिड…
यसकारण फुट्छ जाडोमा ओठ, ओठ फुट्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
ओठमा सिबेसियस ग्ल्यान्ड र हेयर फोलिकल नहुने भएकाले शरीरको अन्य भाग जस्तो गरी यो नरम रहन पाउँदैन । अनि ओठमा…
यी खानेकुरा खाएर तनावमुक्त हुनुस
ब्रोकाउली: ब्रोकाउलीमा फोलिक एसिड पाइन्छ, जसले तनाव कम गर्छ मद्दत गर्छ । दूध: दूधमा ट्राइप्टोफान नामक तत्व हुन्छ, जुन खाएपछि…
खाली खुट्टा हिड्दा हुने फाइदाहरु
१. खाली खुट्टा हिड्दा पैतालामा भरपूर मात्रामा अक्सिजन प्राप्त हुने हुँदा रक्तसञ्चार सहज गराएर थकान कम गराउँछ । २. प्रकृतिको…